FAzụ ahịa Ajụjụ 🛍️ | ThatsLuck.com
Elee ebe m nwere ike ịchọta koodu mmeghe? Achọtara ya na akwụkwọ ntanetị ị nwere ike ịzụta 1-Pịa
na Amazon. Mepee menu Zụta na ịchọta ebe a n'elu wee họrọ ahịa nke mba gị.
►Gịnị ka akwụkwọ ntuziaka ahụ nwere? Akwụkwọ ntuziaka ahụ nwere koodu ntinye, usoro nbudata na ụfọdụ n'ime ihe ndị a. Ntuziaka zuru ezu dị na posts ndị dị n'elu ThatsLuck na na vidiyo na ►YouTube
Gịnị mere o ji dị ọnụ ala? Akwụkwọ ntuziaka nke ThatsLuck nwee ọnụahịa ziri ezi iji dịrị ndị ọrụ niile ohere.
Enweghị m akaụntụ Amazon, enwere m ike ịkwụ ụgwọ na PayPal? Mba, naanị ịzụrụ na ahịa Amazon na mba gị ga-ekwe omume. Họrọ saịtị Amazon site na menu Zụrụ 🔑 were budata akwukwo ihe omuma gi 1-Pịa
MaAmazon adịghị na mba m, enwere m ike ịkwụ ụgwọ site na kaadị akwụmụgwọ? Mba, naanị ịzụrụ na Amazon ga-ekwe omume. N'ezie, ị nwere ike ịrịọ enyi si mba ọzọ ka ọ zụrụ gị akwụkwọ ntanetị ahụ.
Don't Enweghị m onye na-agụ akwụkwọ maka Kindle ebooks, kedu ka m ga-esi guo akwụkwọ ahụ iji chọta koodu ọrụ? Ọ bụrụ na ị na-eji PC ma ọ bụ Mac, ị nwere ike ibudata ngwa Amazon n'efu na njikọ a ► https://www.amazon.com/kindle-dbs/fd/kcp maka Pc / Tablet / Smartphone gị iOS na gam akporo.
Enweghị m ike ịlele akwụkwọ ahụ, enwere ike ịnata koodu ma ọ bụ ebook site na email? N'ihe banyere nsogbu na ederede ị ga-akpọtụrụ nkwado Amazon, ọ nweghị akwụkwọ ntanetị ma ọ bụ koodu ọ bụla a ga-ezitere site na email, ebe ọ ga-abụ imebi iwu Amazon.
The mmelite ndị a bụ n'efu ma ọ bụ na achọrọ m ịzụta koodu mmeghe ọhụụ? Ojiji nke ngwanrọ jikọtara na ihe a kọrọ na ►Usoro na ọnọdụ, nke ị ga-agụrịrị nke ọma na nke ị ga-anabata nke ọma site na iji ngwanrọ ma ọ bụ site n'ịzụ akwụkwọ ntuziaka na Amazon.
MEzighi ezi ịzụta akwụkwọ ntuziaka, enwere m ike ịgbanwe ya? Enweghị mgbanwe ma ọ bụ dochie anya, biko biko arịọla maka ha.
MaAmazon agaghi ekwe m zuta ntuziaka, gini kpatara ya? Amazon na-enyocha ndị ahịa ya niile, ikekwe a kọọrọ gị maka omume rụrụ arụ na ahịa, n'ihi nke a, ị ga-akpọrịrị nkwado Amazon ozugbo.